Shiinaha 55 gal PUR dhalaalaya bulk Factory, Soosaarayaasha Iyo CE - Technology Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
Hoyga > Dhalasho kulul oo dhalaalaya xabagta > PUR dhalaalaya badan > 55 gal PUR dhalaalaya badan
Our 55 gal PUR dhalaalaya badan wuxuu qaadaa tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah iyo saxar ah: Saxanka kuleylka wuxuu ku yaalaa korka xabagta. Marka saxanka kululaynta la kululeeyo, kaliya lakabka kore ee foostada xabagta ayaa la xiriirta saxanka kululaynta wuxuuna gaarayaa barta dhalaalka oo dhalaalaya. Qeybta hoose ee foostada xabagta ma dhalaasho xilligan. Si loo buuxiyo shuruudayada ah inaan u dhalaalno maadaama aan u baahanahay wax soo saar, xabagta ku jirta foostada caagga ah waxay leedahay nolol dheer oo dherer ah: nolosha dheriga wuxuu noqon karaa ilaa 16 saacadood 150 ° C iyo 3 maalmood 90 ° C. Sanadihii la soo dhaafay, wax soo saarka shirkadda si wanaagsan ayey u soo dhoweeyeen macaamiisha.
Hordhac wax soo saar ee 55 gal PUR dhalaalaya badan
1. Qaabka miiraha ee mashiinka oo dhan wuxuu tijaabiyaa shaandhaynta lakabyo badan oo culus. Waxay ka hortagi kartaa xabagta PUR inay noqoto mid casriyeysan oo sababi karta xannibaado.
Booska lagu kordhiyey gudaha naqshadeynta 55 gal PUR bulk melk wuxuu u oggolaanayaa meel ku filan kuleylka kuleylka sanduuqa xakamaynta korantada, taas oo si weyn u yareynaysa dhaawaca qalabka korantada iyo luminta awoodda.
3. Qalabka dhalaalaya ee loo yaqaan '55 gal PUR dhalaalaya badan' wuxuu qaataa silig u adkaysi u leh dabka u adkaysta, kaas oo hagaajiya nabadgelyada qalabka.
2.ProductParameter (qeexida) 55 gal PUR bulkmelter
Xawaaraha ugu badan ee dhalaalida
Saxnaanta xakamaynta heerkulka
Dhexroor foosto saxan cadaadis
Muuqaalka Wax soo Saarka Iyo Codsiga 55 gal PUR dhalaalaya badan
Qalabkayaga '55 gal PUR' dhalaalaya badan ayaa qaata saxnaanta dhabarka gadaal ee saxda ah (soo celinta dareeraha dareeraha bar 1bar), kaas oo lagu qalabeeyay shaqeyn quful si looga fogaado waxyeelada qalabka ama amniga shaqaalaha sababa khaladaadka hawlgalka. Qaab dhismeedka mashiinka oo dhan wuxuu qaataa nidaamka naqshadeynta sheyga, iyo labada qaybood ee nidaamka kontoroolka makaanikada iyo korantada ayaa si madax banaan loo qaabeeyey. Waxay leedahay astaamaha qaabdhismeed macquul ah iyo hawlgal habboon iyo dayactir. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa warshadaha sida baakadaha kartoonka, isku-dhafka la isku qurxiyo, fidinta elektarooniga, iyo isku-darka dharka.
Faahfaahinta wax soosaarka ee 55 gal PUR dhalaalaya badan
Shahaadada Wax soo saarka ee55 gal PUR dhalaalaya badan
6.Geli, Rarid iyo u adeegidba55 gal PUR dhalaalaya badan
We will provide you with 7 * 24 hours follow-up service and technical support when you buy 55 gal PUR dhalaalaya badan of our company, so that you can have no worries after sales.
1. S: Maxay yihiin faa'iido darrada qoriga xabagta dhalaalka kulul?
J: Qorigeena kululeeyaha kulul ee dhalaalaya wuxuu qaataa naqshad jilicsan oo fiyuus ah, qaab macquul ah oo fudud, fudud oo la nadiifiyo, xakamaynta xabagta buufin ee saxda ah, saamaynta atomization aad u fiican, runti aan wovenfabric ahayn, xabagta buufinta filimka daloolka leh oo aan lahayn osmosis.
2.Q: Sidee loo nadiifiyaa dhalaal badan?
J: Haddii dhalaalaya badan ee 'PUR' aan loo adeegsan dhowr toddobaad ama xitaa bilo, dhalaalida kululaynta kulul ee foostada xabagta lama sii dheereyn karo waxaana loo baahan yahay in lagu beddelo foosto cusub oo xabagta ah. Mishiinku sidoo kale wuxuu u baahan yahay nadiifin.
Si aad u nadiifiso PUR dhalaalaya badan, waxaad u baahan tahay inaad iibsato wakiilka nadiifinta badan ee dhalaalaya 'PUR'. Ku shub wakiilka nadiifinta foostada mugdiga ah ee dhalaalaya 'PUR', ka dibna ku rakib PUR dhalaalaya badan. Daar mashiinka kuleylka kuleylka illaa 130 digrii, ka dibna sii daa wakiilka nadaafadda qoriga xabagta xabagta. Sidan oo kale, xabagta hadhaaga ah ee kulushaalka kulul iyo mishiinka mashiinka ku jira ayaa laga soo saari doonaa.
3. S: Adigu ma waxaad tahay shirkad ganacsi ama shirkad ganacsiï¼Ÿ
J: Waxaan nahay xirfad-yaqaan ku-dhalaal kulul dhalaalaya mashiinka, soo-saaraha xabagta dhalaalka kulul.
4.Q: Sidee loo nadiifiyaa sanka?
J: Ku nadiifi godka hawo yar oo hawo qaad ah iyo hawo cadaadis leh. Heerkulka sare wuxuu si fudud u dabcin karaa qadiimiga hore ee kulul.
5. S: Waa kuwee warshado waaweyn oo dhalaaliya badankood inta badan lagu isticmaalo?
J: Bulk melter is wide used and beused for wood, dhismaha, qalabka kabaha, gudaha baabuurta, dharka, baakadaha, elektarooniga